(tonga teto avy amin'ny Finoana silamo ao Madagasikara)
Ny Finoana silamo eto Madagasikara dia niorina tamin'ny taonjato faha-7. Nandray anjara betsaka tamin'ny fiforonan'ny maha Malagasy ny Malagasy izy. Ny fikarohana nataon'ny Pew Research Center tamin'ny taona 2010 dia manambara fa ny 1,1%n'ny mponina eto Madagasikara dia Silamo. 7% kosa izany araka ny The World Factbook - Madagascar. Ny ankamaroan'ny Miozolmana eto Madagasikara dia manaraka ny Finoana silamo sonita avy amin'ny sekoly Shafý, niaraka tamina Ahmadý vitsy izay nanorim-ponenana teto tamin'ireo taona 1980 izay enjehin'ireo Sonita fondamentalista sy ireo Shiita.
1.1 Ny fahatongavan'ny Arabo teto Madagasikara
1.2 Ny lova tamin'ny Arabo
2 Taorian'ny fanjanahan-tany frantsay
Ny fahatongavan'ny Arabo teto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Araka ny lovantsofina dia tonga teto Madagasikara ny Arabo voalohany izay mpitsoa-ponenana nandositra ny ady an-trano taorian'ny nahafatesan'i Mohamady tamin'ny taona 632. Tokony ho tamin'ny taonjato faha-10 na faha-11 dia nisy Arabo mpivarotra vangin'elefanta sy mponina avy any Zanzibara izay nanaraka ny morontsiraka atsinanan'i Afrika nandeha botry, sady nanorim-ponenana tany amin'ny morontsiraka andrefan'i Madagasikara. Isan'ireo ny Zafiraminia izay nipoiran'ny foko Antemoro sy Antanosy sy foko hafa koa araka ny lovantsofina. Ny andiany farany tamin'ireo mpifindra monina arabo dia ireo Antalaotra izay avy any Afrika Atsinanana nanorim-ponenana tao avaratra-andrefan'i Madagasikara, tao amin'ny faritr'i Mahajanga, sady izy ireo no azo lazaina fa nitondra voalohany ny finoana silamo teto amin'ny Nosy.
Ny lova tamin'ny Arabo[hanova | hanova ny fango]
Ireo mpifindra monina arabo miozolmana dia vitsy raha ampitahaina amin'ny Indoneziana sy ny Bantoa, nefa namela lova maharitra izy ireo: anarana malagasin'ireo fizaran-taona, anaran'ny volana sy ny andro, ny fanaovana hasoava-jaza (famoràna), ny fampiasana vola, ny fanamboarana trano fitehirizam-bokatra iombonana, ary ny teny fiarahabana isan-karazany. Ombiasa na ombiasy arabo maro no niasa tao amin'ny fitsarana ao amin'ireo fanjakana isam-poko teto Madagasikara. Ny Arabo miozolmana dia nitondra teto Madagasikara ny fomban'ny fianakaviana entin-dray izay mifanohitra amin'ny fomban'ny Polineziana manome lanja mitovy ny lahy sy ny vavy. Avy amin'ny Arabo koa ny Sorabe, abidy mifototra amin'ny abidy arabo, izay nampiasaina hanoratana ny fiteny malagasy, indrindra ny fitenim-paritry ny Antemoro. Ny Arabo koa no voalohany nahafantatra ny fiavian'ny Malagasy ka nilaza fa olona avy any Indonezia no nanjanaka voalohany an'i Madagasikara.
Taorian'ny fanjanahan-tany frantsay[hanova | hanova ny fango]
Taorian'ny nahazoan'i Madagasikara fahaleovan-tena tamin'ny taona 1960 taorian'ny fanjanahan-tany frantsay dia nifandray akaiky tamin'ny fahefana komonista tao amin'ny Firaisana Sovietika. Izany dia nangeja ny fivoaran'ny fivavahana rehetra tao Madagasikara. Na dia izany aza dia nanomboka nihataka tamin'ny Firaisana Sovietika i Madagasikara tamin'ireo taona 1980 ka niara-niasa tamin'i Frantsa. Amin'izao i Madagasikara dia lasa firenena miantoka ny fahalalahan'ny fivavahana.
Amin'izao fotoana izao dia 7%n'ny mponina no Silamo, araka ny fanadihadiana nataon'ny Departemanta Amerikana tamin'ny taona 2011, nisy fihenana izany raha mitaha amin'ny tombana nataony tamin'ny taona 2009 izay nahatratra 10 hatramin'ny 15%. Ny Pew Research Center kosa anefa manombana izany ho 3% tamin'ny taona 2010. Misy ireo Malagasy silamo, ny Komoriana silamo, ny Karàna silamo (Pakistaney sy Indiana), ao koa ireo Srilankey silamo sns. izay mitsinjara amin'ireo sampan'ny Finona silamo misy eto Madagasikara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Finoana_silamo_eto_Madagasikara&oldid=974902"
Voaova farany tamin'ny 19 Septambra 2019 amin'ny 12:42 ity pejy ity.